बेग्लै महाभारत- विविधा - कान्तिपुर समाचार
‘यो द्वापर होइन, कलियुग हो । पुरानो महाभारत अब काम लाग्दैन । तपाईं बेग्लै महाभारत लेख्नोस् ।’
असार २७, २०७७ शरच्चन्द्र वस्ती
जूवामा सर्वस्व हारेर पाण्डवहरू वनवास गएपछि सुयोधनको चुरिफुरी बढ्दै गयो । उद्दण्ड त ऊ पहिलेदेखि नै थियो, अब उसको उद्दण्डताले आकाश छुन लाग्यो । बोलीमा, व्यवहारमा र राजकीय कार्यव्यापारमा हुनुपर्ने मर्यादालाई उसले पाण्डवसँगै वनवास पठाइदिएको थियो र अहंकारलाई आफ्नो सिंहासन बनाएको थियो ।
हुन त ऊ युवराज मात्र थियो र राजसिंहासनमा धृतराष्ट्र आसीन थिए । तर दृष्टिविहीन राष्ट्रप्रमुख उसैका आँखाले हेर्थे, उसैका कानले सुन्थे र उसैको बोली बोल्थे । उसैको निर्णय अनुसार परिचालित हुन्थे । भव्य नवीन दरबार, सुन्दरी दासीहरू, दुर्लभ मदिरा, रत्नजडित रेशमी परिधान र बहुमूल्य सोह्रघोडे रथ लगायत विलासिताका सामग्रीले उनलाई रद्द पारेर ऊ सर्वशक्तिसम्पन्न कार्यकारी महाराज बन्न पुगेको थियो । उसमाथि कसैको अंकुश थिएन ।
नाम सुयोधन भए पनि ऊ आफूलाई दुर्योधन भन्न रुचाउँथ्यो । गदा उसको प्रिय शस्त्र थियो । आफ्ना विरोधीलाई गदा प्रहारबाट जमीनमा धसाउनु उसको प्रिय व्यसन । मत बझाउने धेरैलाई उसले यसैगरी तह लगाइसकेको थियो । गदा सञ्चालनमा जस्तै वीणा वादनमा पनि ऊ प्रवीण थियो । समय र परिस्थिति अनुरूप नयाँ राग निकालेर दुनियाँलाई लठ्ठ पार्न उस्ताद । उसले छेडेको रागले प्रजाजन सम्मोहित हुन्थे र जयजयकार गर्दै उसको पछि लाग्थे । तिनका दु:खकष्ट र भोकप्यासको रापलाई उसले यस्तै रागद्वारा निस्तेज पार्ने गरेको थियो ।
एक दिन अकस्मात् देशमा महामारी आइलाग्यो । त्यसको न कुनै औषधि थियो, न उपचार । वैद्यहरू आफैं भयभीत थिए । त्यही समयमा अधिकतर जनपदमा अनिकाल शुरू भयो । रोग र भोकले आक्रान्त प्रजाजन राजदरवार वरिपरि जम्मा भएर त्राहित्राहि गर्न थाले । यसैबीच सुदूर सीमान्त प्रदेशमा प्रवेश गरेर शत्रुदेशले कतिपय ग्राम आफ्नो अधीनस्थ गरेको खबर आयो ।
खबर सुन्नासाथ सुयोधन वीणा उठाएर देशभक्ति–राग अलाप्न थाल्यो । खबर लिएर आएको सेनापतिले ‘आहा, कति मीठो राग !’ भनेर प्रशंसा गरेपछि
ऊ पुलकित भएर सेनापतिसँगै दरवारको कौसीमा उक्ल्यो र प्रजाजनलाई नयाँ राग सुनाउन थाल्यो । उनीहरू आफ्नो पीडा बिर्सेर उसको जयजयकार गर्न थाले । विदा हुन लाग्दा सेनापतिले अयाचित परामर्श टक्रयायो, ‘शत्रुको कान टालिएको छ । उसले महाराजको राग श्रवण गर्न सक्तैन । तीक्ष्ण वाणहरूले मात्र उसको कर्णविवर खोल्न सक्छन् । त्यसका लागि सैनिक अभियान जरूरी छ । प्रभुको जो विचार !’
त्यही अपराह्न सुयोधनले सर्वोच्च राजपरिषदका सदस्यहरूलाई मन्त्रणा कक्षमा आमन्त्रित गर्‍यो । परिषदमा ऊबाहेक चार सदस्य शकुनि, कर्ण, अश्वत्थामा र दु:शासन थिए, जो उसका सम्पूर्ण उचित–अनुचित कृत्यका उत्प्रेरक, सहयोगी र सहभागी रहँदै आएका थिए । सधैं झैं, आजको समस्या अपसारण गर्न पनि उनीहरूले साथ दिने कुरामा ऊ विश्वस्त थियो । तर वर्तमान ग्रहस्थिति उसका लागि किञ्चित् अनुकूल थिएन ।
‘सुदूर सीमान्त प्रदेशमा शत्रुलाई पाठ पढाउन सैनिक अभियान आवश्यक देखिएको छ,’ सुयोधनले मन्त्रणा आरम्भ गर्ने उपक्रम गर्‍यो, ‘त्यसनिम्ति, विभिन्न ठाउँमा छरिएर रहेका सैनिकलाई एकत्र गरी यथाशीघ्र प्रयाण गराउनुपर्ने भयो ।’
‘तपाईं हाम्रो मर्यादामा आघात पार्ने कुचक्र रच्तै हुनुहुन्छ युवराज,’ अश्वत्थामाले आपत्ति जनायो, ‘हामी चार जनाको सेवामा एक सहस्र सैनिक परिचालित छन् । तिनलाई सैनिक अभियानमा पठाएर हाम्रो अपमान गर्ने ?’
‘यो कदापि सहय हुँदैन युवराज,’ कर्णले सही थाप्यो ।
आफ्ना निकटतम मित्रहरूको आक्षेपले सुयोधन रन्थनियो । उसको आहत अहंकारले फूत्कार गर्‍यो, ‘मलाई युवराज होइन, महाराज भन । वास्तविक महाराज मै हुँ ।’
‘सत्य ढाकछोप गरेर लुक्तैन भान्जा,’ शकुनिले भन्यो, ‘हाम्रो मर्यादा घटाउने खेलमा लाग्नेलाई हामी कसरी महाराज स्वीकार्न सक्छौं ?’
‘मामाश्री ठीक भन्नुहुन्छ,’ दु:शासनले ओट थाप्यो ।
चारै जनाको एउटै स्वर सुनेर सुयोधनलाई खपिनसक्नु भयो । ऊ गर्जियो, ‘होइन, तपाईंहरूले के खोजेको ? दशकौंदेखि राज्यको उच्चतर सुखसुविधा उपभोग गर्दै आउनुभएको छ । सबैको गृहकोष स्वर्णमुद्राले भरिएको छ । दास–दासीको फौज छ, राजसी खाद्यवस्तु र मदिराको छेलोखेलो छ । सारथि सहितका अनेक रथ अहोरात्र प्रांगणमा उपस्थित छन् । आमोद–प्रमोद र विलासिताको सम्पूर्ण व्ययभार राजकीय कोषबाट वहन गरिएको छ । अरू के चाहियो ?’
‘तिम्रो कार्यशैली हाम्रा लागि सन्तुष्टिप्रद भएन भान्जा,’ शकुनिले तिखुल्ले स्वर निकाल्यो, ‘हामी महान् आत्मा हौं । हामी छायामा पर्दा जनता अपमानित हुन्छन् । देश दु:खी हुन्छ । राज्यव्यवस्था कमजोर हुन्छ । हामीले धेरै त्याग गर्‍यौं । देश र जनताका लागि अब तिमीले त्याग गर्नुपर्छ ।’
‘के त्याग गर्ने ?’
‘सिंहासन त्याग गर । यतिन्जेल तिमी बस्यौ । अब म यसको शोभा बढाउँछु ।’
‘दुई जनाले चोचोमोचो मिलाएर हुँदैन,’ घुटुक्क थूक निल्दै अश्वत्थामाले प्रतिवाद गर्‍यो, ‘पहिले सिंहासन खाली होस् । को बस्ने भन्ने कुरा त्यसपछि निर्णय हुन्छ ।’
शकुनि सशंकित भयो र मनमनै ङयार्र गर्‍यो, ‘तँलाई त म देखाउँछु नि, पख् न !’
सुयोधनको शरीर क्रोधले काम्न थालेको थियो । ऊ एक एक गरेर चारै जनालाई दपेट्न थाल्यो :
‘को बस्ने मेरो सिंहासनमा ? शकुनि मामा ? हाम्रो राज्य ध्वस्त पार्ने अभिप्रायले हामीकहाँ घुस्रिन आएको प्रतिशोध–अन्ध गान्धार राजकुमार होइन तपाईं ? पासा हान्नु नै सर्वोच्च योग्यता होइन तपाईंको ? आभिचारिक विधिद्वारा मानवीय अस्थिको पासा निर्माण गर्न १८ जना निर्दोषको हत्या गर्ने तपाईं नै होइन ? त्यसबापत दण्डित हुनबाट आजसम्म जोगिनुभएको छ, यही तपाईंको अहोभाग्य होइन ? आफ्नै राज्यबाट बेदखल हुनेले अर्काको सिंहासन ताक्न लाज लाग्दैन ?
‘कि अश्वत्थामा बस्ने मेरो सिंहासनमा ? सधैं लुब्ध, सधैं पदाकांक्षी र सधैं तर मार्दै आएका काइते होइनौ तिमी ? आजसम्म कतिवटा एकलव्यका औंला काटयौ र जालझेल गरेर राज्यको कति भूमि हडप गर्‍यौ, त्यसको हिसाबकिताप लिएर दण्डाधिकारी उपस्थित भयो भने के गर्छौ ? हामीले दिलाइदिएको अहिच्छत्र राज्य छँदाछँदै वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा हाम्रै सिंहासन ताक्ने ?
‘कि सूतपुत्र कर्णले सपना देख्ने मेरो सिंहासनको ? रातिराति सुवर्ण–तस्करीको गुप्तमार्गमा विचरण गर्ने र बिहानबिहान सुनको नाउँमा पित्तल दान गरेर महादानी कहलाउन खोज्ने ढोंगी होइनौ तिमी ?
गरिखाऊ न त भनेर अंगदेशको रजौटा बनाएर पठाइदिएको, जनता रिझाउन नसकेर त्यहाँबाट पनि लखेटियौ होइन ? राजकुलभित्रै नपरेपछि कुन मुखले मेरो सिंहासनमा र्‍याल चुहाउँछौ ?
‘अनि तँ दु:शासन ? तँ झल्लु पनि मलाई आँखा चम्काउने ? एकचोटि राज्यकोषको जिम्मेदारी दिएको, त्यसैमा प्वाल पारेर भाग्ने तैं होइनस् ? सुदूरपूर्व कामरूप क्षेत्रमा पुगेर तेरो घाँटीमा खड्ग राखी कोष फिर्ता ल्याउनेहरू यही दरवारमा छन् भन्ने बिर्सिस् ? तैंले कुन आँट र कुन हैसियतले मेरो सिंहासन ताकिस् ?’
यही वेला दरवार बाहिर ठूलो कोलाहल सुनियो । रोग र भोकले पीडित प्रजाजनको चीत्कार रहेछ । ‘राजकीय मन्त्रणामा खलल पार्ने ?’ भन्दै सुरक्षाकर्मीले दण्डप्रहार गरेर तिनलाई एक योजन पर पुर्‍याए ।
घाइते भएर बीच बाटोमै लडेकाहरूले भने त्यहीं छटपटाइरहने सुविधा पाए ।
यता सुयोधन गदा उचालेर गर्जिंदैथियो, ‘मेरो राजदण्ड यही हो । अब यसैले निर्णय गर्छ । अनुचित दबाव कदापि क्षम्य हुन सक्तैन ।’
सुयोधनको दपेटाइले चार भाइ तीव्र आक्रोशित भए । अश्वत्थामाले भन्यो, ‘तिम्रो योजना हामीलाई कारागारमा हाल्ने हो भन्ने स्पष्ट भयो । हामी अहिल्यै धृतराष्ट्रकहाँ जान्छौं र तिम्रो पोल लगाउँछौं । अनि देखौला ।’
‘जाओ, खुशीसाथ जाओ । तिमीहरूलाई के भन्ने भनेर बूढालाई मैले बिहानै सिकाइसक्या छु । त्यही सुनेर फर्कनू,’ सुयोधन हाँस्न थाल्यो ।
यसैबीच शून्यमा ओमकारको ध्वनि गुञ्जियो र मन्त्रणा कक्षमा महर्षि वेदव्यासको प्रवेश भयो । सबैले उठेर अभिवादन गरे । ‘आयुष्मान् भव,’ एकमुस्ट आशीर्वाद दिंदै महर्षिले भने, ‘मैले योगबलद्वारा तिमीहरूको सम्पूर्ण विवाद श्रवण गरें । विग्रहले कसैको हित गर्दैन । तिमीहरू मेलमिलापतिर लाग ।’
‘अपमान सहेर कसले मेलमिलाप गर्छ ?’ शकुनि बटारियो ।
‘सिंहासनमा दागा धर्नेसित केको मेलमिलाप ?’ सुयोधनले गदा सुम्सुम्यायो ।
‘मैले लेखेको महाभारतमा तिमीहरूबीच द्वन्द्व छैन । त्यसको विपरीत नजाऊ,’ महर्षिले पुन: सम्झाउने प्रयास गरे ।
‘यो द्वापर होइन, कलियुग हो । तपाईंको महाभारत अब काम लाग्दैन,’ सुयोधन व्यंग्यमा ओर्लियो, ‘कलियुगको कथा फरक हुन्छ । अब तपाईं बेग्लै महाभारत लेख्नोस् ।’
‘अवश्य लेख्नेछु पुत्र ! अब तिमीहरूलाई नाश गर्न पाण्डव आउनुपर्नेछैन । महाभारतको युद्ध पनि हुनेछैन । आफैंबीचको महाभारत तिमीहरूको विनाशका लागि पर्याप्त हुनेछ,’ अल्प प्रश्वासका साथ वेदव्यासले भने र ओमकारको ध्वनिबीच त्यहाँबाट अलप भए ।
प्रकाशित : असार २७, २०७७ ११:४९
जहाँ पुगे पनि, जस्तै तालिम लिए पनि हामी नेपालमै फर्केर आयौँ किनभने यहाँ वनस्पति विभागजस्तो कार्यालय थियो र प्रयागराजजस्ता हाकिम थिए ।
असार २७, २०७७ तीर्थबहादुर श्रेष्ठ
विसं २०१७ सालमा त्रिचन्द्र कलेजबाट बीएस्सी (बायोलजी) पास गरेर वनस्पति अड्डा छिर्दा हाकिमबाजे प्रयागराज पाण्डेजस्तो ठूलो जीउको मान्छे मैले सायद देखेकै थिइनँ । उहाँले पनि मजस्तो दुब्लो केटा नदेखेको हुनसक्छ । मेरा प्राध्यापक समरबहादुर मल्लले ‘जागिर खान्छौ’ भनेर नयाँ सडकबाटै मलाई टिपेर लगेका थिए ।
भोलिपल्टैबाट जागिरे भएँ– असिस्टेन फर्मासिस्ट । महिनाको तलब रु. १८०/– (एक सय असी रुपैयाँ) । महिनाको तलब नथाप्दै एमएस्सी बोटानी पढ्न भारतको अलिगढ जाने छात्रवृत्तिमा नाम निस्कियो । वन मन्त्रालयले ‘जागिर छोडेर जाऊ’ भन्यो । प्रयागराज पाण्डेले मेरो लागि अध्ययन बिदा मिलाई छाडे । आधा तलब खाएर दुई वर्षपछि विभागमा हाजिर भएँ । त्यसपछि प्रत्येक वर्ष जडीबुटी र वनस्पति सर्वेक्षण गर्ने र वनस्पतिका नमुना संकलन गर्ने काममा मेची–महाकाली भ्रमण गर्ने अवसर आयो ।
अरूको सम्झनामा बाँचिरहने मानिसहरू नै पूजनीय हुन्छन् । यस्ता व्यक्तिहरूको स्मरण चिराग बोकेर समाजलाई सही बाटोमा डोर्‍याउन सकिन्छ । यसै सिलसिलामा आजभन्दा ३४ वर्षपहिले परलोक भएका स्वर्गीय प्रयागराज पाण्डेको शतवार्षिकी वर्ष (विसं १९७६–२०७६) को विभिन्न कार्यक्रमहरू पूरा गरेर यही असार १८ गते उहाँको १०१ औं वर्ष पूरा हुने जन्म दिवस मनायौं । नेपालका प्रथम बोटानिस्ट प्रयागराज पाण्डे फाउन्डेसन नामक संस्थाले नेपालको वानस्पतिक वैभवको संरक्षण, संवद्र्धन र विकासको फाँटमा नयाँ पुस्ता र पुराना पुस्ताका वैज्ञानिक, प्राविधिक एवं प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूको अन्तरक्रिया र सहकार्यको सिलसिला अगाडि बढाउने काम भयो । संस्थापक अध्यक्ष श्री मधुसुदन विष्ट (पूर्वमहानिर्देशक वनस्पति विभाग) तथा सहअध्यक्ष श्री विमलराज पाण्डे (प्रयागराज पुत्र) लगायत कार्यकारी समितिका सबै सदस्यहरू बधाईका पात्र पनि हुन् ।
प्रयागराज पाण्डेलाई नेपालका प्रथम बोटानिस्ट किन भनियो भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । किनभने जडीबुटी, वन–वनस्पतिका विशेषज्ञहरूको खोजीनिती गर्न थाल्यौं भने रामायणकालसम्म पुगिन्छ । लक्ष्मणबुटी श्री हनुमानले चिन्न सकेनन् । त्यसलाई वैद्य सुसेनाले चिने । यस्तै हाम्रा वैद्य, कविराज, आम्ची, धामी, झाँक्री, गुरुबा वा फेदाम्नाहरूलगायत पर्वतीय गोठालाहरू जडीबुटी विषयका ज्ञाता हुन् । पण्डित धननाथ देवकोटाले चन्द्रशमशेरको पालामा जडीबुटीसम्बन्धी निघन्टु तयार गरिसकेका थिए । वानस्पतिक सर्वेक्षणको इतिहासमा लालध्वज (सन् १९२९–३१) तथा खडानन्द शर्मा (सन् १९३२–३७) को विरुवा संकलन–अवधि कीर्तिमानी थियो ।
प्रयागराज पाण्डेको कथा बेग्लै छ । बोटानी (वनस्पतिशास्त्र) विधामा एमएस्सी (स्नातकोत्तर) परीक्षा उत्तीर्ण गरी सन् १९४२ मा इलाहावाद विश्वविद्यालयबाट प्रमाणपत्र थापे । नेपाल सरकारको वन मन्त्रालयअन्तर्गत स्थापित बोटानिस्ट पदमा बहाली गरे । औपचारिक शिक्षा र सरकारी पदको हैसियतले उहाँ नेपालको प्रथम बोटानिस्टको रूपमा परिचित हुनुहुन्छ । हामी उहाँलाई प्रथम बोटानिस्टको रूपमा स्मरण गर्छौं तर सम्मान भने उहाँको बहुआयामिक देनप्रति समर्पित छ । संस्थागत विकासको सफलतातिर लक्षित छ ।
मैले २०१७ सालमा वनस्पति फाँट नामक अड्डामा प्रवेश गरेदेखि नै उहाँ हामीलाई एउटा सपना बाँड्नुहुन्थ्यो । हिमाली जडीबुटीलाई चिन्ने, बेलैमा संकलन गर्ने, सफा गर्ने, सुकाउने र पिठयुँमा बोकेर निकासीका लागि साहुकहाँसम्म पुर्‍याउने गाउँले दिदीबहिनी, दाजुभाइका पसिनाको मूल्य कसरी चुकाउने ? रोग, भोक र गरिबीलाई जडीबुटीले कसरी पखाल्ने ? देशभित्रै जडीबुटी प्रशोधन र औषधि उत्पादन कसरी गर्ने ? भन्नुहुन्थ्यो– हाम्रो लक्ष्य ‘प्लान्ट्स टु प्रोडक्ट’ हो ।
विसं २०१७ सालमा पकनाजोलको कम्पुकोटभित्र रहेको सानो २/३ कोठे अड्डा २०१९ सालमा थापाथलीको ११/१२ रोपनीमा फैलिएर शाही औषधि अनुसन्धानशाला, औषधि उत्पादन केन्द्र, गोदाबरीमा शाही वनस्पति उद्यान, राष्ट्रिय हर्वेरिएम (वनस्पति संग्रहालय) एवं वनस्पति अनुसन्धान केन्द्र, विभिन्न क्षेत्रमा जडीबुटी फार्महरू जस्तै : शिवपुरी, मणिचुर, दामन, टिस्टुङ, हेटौंडा, धरान एवं व्यापार र प्रशोधन केन्द्र नेपालगन्ज तथा कोइलाबास स्थापना भएका थिए । यिनै संस्थाका गर्भबाट शाही औषधि लिमिटेड, जडीबुटी प्रशोधन तथा उत्पादन लिमिटेड कम्पनी एवं औषधि व्यवस्था विभागको पनि जन्म भयो । लगभग १० वर्षभित्र वनस्पति विभाग विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रमा विशेषत: वनस्पतिशास्त्र, फार्मेसी (औषधि विज्ञान) एवं रसायनशास्त्र (केमेस्ट्री) मा नेपालका अगुवा संस्थाका रूपमा परिचित हुन पुग्यो ।
प्रयागराज पाण्डेको विकास रणनीति भन्नु नै जनशक्तिको विकास र उच्च शिक्षाको प्राथमिकता थियो । युवा शक्तिलाई तुरुन्त भर्ना लिने र उच्च शिक्षाको अवसर प्रदान गर्ने । वनस्पति विभागमा जागिर खाएपछि दुई वर्षभित्र बेलायत जान पाइन्छ भन्ने मान्यता नै स्थापित हुन थाल्यो । तर, नेपालको दुर्गम भ्रमण गर्छु भन्नेलाई मात्र प्रवेश मिल्थ्यो । त्यसो भए तापनि थुप्रै महिला वैज्ञानिकहरूले वनस्पति विभाग प्रवेश गरे र पैदलयात्रामा देशदर्शन गरे । त्यसका अतिरिक्त आफैंले प्रयोगशालामा उत्पादन गरेका औषधिहरू पनि बजारीकरण गर्न असन इन्द्रचोक चहारे । हाकिमबाजेले खटाएपछि महिला र पुरुष सबै उत्तिकै आज्ञाकारी । हाल बजारमा देखिने सिटामोल र सन्चोको पहिलो ट्याब्लेट वा सिसी वनस्पति विभागका महिला प्राविधिक कर्मचारीकै हातबाट विमोचन भएको मान्न सकिन्छ । संस्थागत विकासलाई गतिशील बनाउन नयाँ योजना र नयाँ कार्यक्रमहरूको आवश्यकता पर्छ । नयाँ दरबन्दी र उच्च पदको सिर्जना गर्न सरकारलाई वा दातृ संस्थाहरूलाई ठोस प्रभाव पार्न सक्ने विशेष क्षमता थियो उहाँमा । फलस्वरूप कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासका अवसरमा पनि कमी थिएन ।
नेपालको वानस्पतिक वैभवको खोजी र अनुसन्धानमा बेलायत, जापान तथा फ्रान्सलगायत धेरै राष्ट्रहरू चासो राख्छन् । तिनलाई वनस्पति विभागको दायराभित्र ल्याउने काममा प्रयागराज पाण्डेको विशेष भूमिका रह्यो । विदेशका दक्ष वैज्ञानिकहरूसँग हाम्रा वैज्ञानिकहरूको सहकार्य प्रारम्भ भयो । नेपालको स्थलगत अध्ययन मात्र होइन विदेशका ख्यातिप्राप्त संस्थाहरूमा अध्ययन गर्न जाने सिलसिला पनि बस्यो ।
फलस्वरूप मैले पनि बृटिस म्युजियम, क्यु–गार्डेन, इडिनवरा गार्डेनमा हिमाली वनस्पतिबारे विशेष तालिम प्राप्त गरें । त्यसपछि फ्रान्सको ग्रनोवलबाट विद्यावारिधि पनि गर्ने मौका मिल्यो । जहाँ पुगे पनि जस्तै तालिम लिए पनि हामी नेपालमै फर्केर आयौँ किनभने यहाँ वनस्पति विभागजस्तो कार्यालय थियो र प्रयागराजजस्ता हाकिम थिए ।
प्रकाशित : असार २७, २०७७ ११:२९